भारतमा देखियो ओमिक्रोन, नेपाल पनि जोखिममा - समाचार - कान्तिपुर समाचार
अहिलेकै अवस्थामा आफू एक्लै उठेर जित्ने शक्ति न देउवासँग देखिएको छ, न अरु कोहीसँग । त्यहीकारण आकांक्षीहरू टिम बनाउँदा फरक गुटका ‘हेभी वेट’लाई तानेर आफ्नो टिमबाट उम्मेदवार बनाउने दाउमा छन् ।
मंसिर १६, २०७८ प्रकाश धौलाकोटी
काठमाडौँ — कांग्रेसमा महाधिवेशनका लागि एक सातामात्रै बाँकी हुँदा पनि सभापतिका आकांक्षी नेताहरू आफ्नो उम्मेदवारीबारे ढुक्क छैनन् ।सभापतिका स्वाभाविक उम्मेदवारले समेत आफ्नो टिम बनाउन सकेका छैनन् । नेताहरू आफ्नो नेतृत्वमा प्यानल बनाउने कसरत गरिरहेका छन् । महाधिवेशनको मुखैमा चौतर्फी गुटगत चलखेल सुरू भएको छ ।
सबै आकांक्षीहरू आ–आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न गुटभित्र र अन्तरगुटका चलखेलमा सक्रिय छन् । विगतमा बलियो आधार बनाएर रहेका परम्परागत गुटहरू भने यसपटक तितरबितर छन् । ‘अहिल्यै १४ औँ महाधिवेशनमा क–कसका बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन, तर अब ठूलै आश्चर्य नभए सभापतिका लागि चार जनाभन्दा धेरै आकांक्षी हुने लगभग निश्चित छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले इकान्तिपुरसँग भने ।
देउवाइतर समूह यसपटक झन् तितरबितर छ । अघिल्लो महाधिवेशनमा सिटौलाले साथ छोड्दा हार बेहोरेको पौडेल समूह अहिले साझा उम्मेदवार खोज्दैछ । तर, सबै आकांक्षी आफू नै साझा उम्मेदवार बन्ने अवस्थामा मात्रै अर्कोलाई छाड्ने बताइरहेका छन् । त्यस्तोमा गुटका नेता रामचन्द्र पौडेल नै एक्लिने अवस्था बनेको छ । महामन्त्री शशांक कोइरालाले आफूनिकटहरूलाई टिमबाट साझा उम्मेदवार नभए आफू उम्मेदवार नबन्ने भनेका छन् । तर, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला कसैका लागि नछोड्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको भूमिका के हुने भनेर प्रष्ट छैन । तर, देउवासँग मिलेर होस् वा पौडेलसँग, उनले वडादेखि केन्द्रसम्मै आफ्नो गुटको अस्तित्व बचाएका छन् । झापा र बागलुङमा त उनले आफूनिकटलाई जिल्ला सभापति नै बनाए । आफैँ उम्मेदवार बनेको अवस्थामा उनी फेरि निर्णायक बन्न सक्छन् । केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
अहिलेकै अवस्थामा आफू एक्लै उठेर जित्न सक्ने शक्ति न देउवासँग देखिएको छ, न अरु कोही आकांक्षीसँग । त्यहीकारण आकांक्षीहरू टिम बनाउँदा फरक गुटका ‘हेभीवेट’लाई तानेर उम्मेदवार बनाउने दाउमा छन् । ‘अहिले न को–को उम्मेदवार बन्ने भन्ने टुंगो छ, न कुन गुटबाट उम्मेदवार बन्ने भन्ने नै टुंगो छ, अहिले त एकदमै तरल अवस्था छ, सबै तितरवितर बनेका छन्,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले नै कुन नेता कता जान्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ ती नेताले प्रदेश अधिवेशन सकिएपछि मात्रै नेताहरूले आफ्नो टिम घोषणा गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘क्षेत्र र जिल्लाका प्रतिनिधिको संख्या यकिन हुँदैछ, कसको कस्तो प्रभाव र जनमत रहन्छ ? त्यही आधारमा उम्मेदवारको टुंगो लाग्ने देखिन्छ,’ ती नेताले भने ।
सभापति देउवा विपक्षीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा खेलेर लाभ लिन माहिर छन् । उनले १३ औँ महाधिवेशनमा पौडेल समूहको असन्तुष्टिमा खेलेर अर्जुननरसिंह केसीलाई महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाएका थिए । देउवाको नजर यसपटक पनि आफूइत्तर समूहबाट कोही न कोहीलाई आफूतिर तानेर कमजोर पार्नेमा छ । उनले सिंह र सिटौलासँग त्यस्तो प्रस्ताव गरिसकेका छन् भने महामन्त्री कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला पुत्री सुजाता कोइराला र वरिष्ठ नेता पौडेलसम्मलाई नजर लगाइरहेका छन् ।
पौडेल समूहमा भने धेरै नेता छन्, त्यसमाथि सबै पदका आकांक्षी छन् । जसकारण देउवातिरबाट तान्नेभन्दा पनि समूहको एकता नै मुस्किल बनेको छ । तैपनि देउवा टिमभित्रको असन्तुष्टिमा खेल्ने प्रयास भने पौडेल समूहका नेताहरूले पनि गरिरहेका छन् ।
क–कसले फेरे गुट ?
१३ औँ महाधिवेशनपछि अहिलेसम्म गुटगतरुपमा धेरै फेरबदल भइसकेको छ । देउवाको टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेका केसी पौडेल समूहमै फर्किएका छन् । सिटौला टिमबाट महामन्त्री उम्मेदवार बनेका गगन थापाले सिटौलाको साथ छोडेका छन् । उनी अहिले इत्तर समूहको एकता भन्दै पौडेल समूहमा छन् ।
देउवाले आफ्नो विश्वासपात्रका उपसभापति मनोनित गरेका विमलेन्द्र निधि अब उनीसँग छैनन् । त्यस्तै, १३ औं महाधिवेशनमै देउवासँग नजिकिएका विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता भए, तर अहिले उनी त्यो टिममा रहने वा नरहने निश्चित छैन । महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका उनको व्यवस्थापनमा देउवालाई सकस परेको छ । शर्माले आफूले महामन्त्री नपाए निधिसँग नजिकिने संकेत गरेका छन् । देउवा टिमबाट केन्द्रीय सदस्य जितेका चन्द्र भण्डारी अहिले पौडेल समूहतर्फ लागेका छन् ।
पौडेल समूहबाट आदिवासी जनजातितर्फ केन्द्रीय सदस्य बनेका कल्याण गुरुङले पौडेल समूह छाडेका छन् । त्यस्तै, आनन्द ढुंगाना, नारायण खड्का र गोविन्द भट्टराईले पनि पौडेल समूह छाडेर देउवासँग निकटता बढाएका छन् ।
यसबीचमा देउवाले आफ्नो गुटमा निकै ठूलो शक्ति आर्जन गरेका छन् । ०६४ सालमा कांग्रेस छाडेर मधेशी जनअधिकार फोरममा लागेका गच्छदार १० वर्षपछि गएको आमचुनावअघि कांग्रेसमा फर्किए । देउवाले गच्छदारलाई उपसभापति बनाए । गच्छदारसहित उनको पक्षबाट मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरू रामजनम चौधरी, मोहम्मद सिद्धिकी, भारतेन्दु कुमार मल्लिक, हेमराज तातेड, गोपाल दहित, हरिप्रसाद न्यौपाने, मंगलप्रसाद थारु, योगेन्द्र चौधरी, सुमित्रा थरुनी, कल्पना चौधरी र पवनकुमार सारडा देउवासँगै छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा पुत्र सुनिलबहादुर थापा र उनीसँगै कांग्रेस प्रवेश गरेका केन्द्रीय सदस्यहरू रामप्रसाद भट्टराई, विष्णुविक्रम थापा, बावुराम बस्नेत, वृजलाल यादव, किरण गिरी र टिएन योगी पनि देउवा समूहमै छन् ।
देउवाले यो कार्यकालमा २२ जना आमन्त्रित सदस्य मनोनित गरेका छन्, तीमध्ये अधिकांश उनीसँगै निकट मानिन्छन् ।
अन्य पार्टीबाट आएका जंगीलाल राय, कर्णबहादुर बुढा, शम्भुलाल श्रेष्ठ, जनकलाल कलौनी, अभिषेखप्रताप शाह, मोहनसिंह राठोर, भूमिबहादुर गुरुङ, कुमार खड्का, दयाराम पाण्डे लगायत नेताहरू पनि देउवा समूहमै थपिएका छन् ।
११ औं महाधिवेशनपछि मुलतः कांग्रेसमा दुई शक्ति थिए– एकातिर गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्कोतिर शेरबहादुर देउवा पक्ष । त्यसयता ती गुटको निरन्तरता त छँदैछ, गुटभित्रै दर्जनौं उपगुट मौलाएका छन् । तर, ती गुट प्रभावशाली विचार समूह होइनन्, केवल सत्ता स्वार्थ र विरासत धान्ने प्रपञ्चमा उभिएका छन् । कांग्रेसमा सक्षम र योग्य नेतृत्व विकास नभएको होइन, तर गुटको जालो यसरी बुनिएको छ कि गुटबाहेकबाट पार्टीमा नेतृत्वको विकल्प खोज्नु दुस्साहस जस्तो देखिन्छ ।
कांग्रेसमा त्यस्तै विकल्प खोज्ने प्रयास नरहरि आचार्य र भीमबहादुर तामाङहरूले गरेका थिए । आचार्यले ११ औं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसादसँगै सभापतिमा चुनाव लडे, भीमबहादुरले देउवा र सुशील कोइरालासँग १२ औं महाधिवेशनमा । तर वैकल्पिक नेतृत्व दिन नसकेका उनीहरूले सभापतिमा पराजित भएपनि गुट चलाएनन् । तर, १३ औं महाधिवेशनले भने कांग्रेसमा तेस्रो गुट थप्यो ।
गिरिजाप्रसादको निधनपछि उनले सम्हालेको नेतृत्व सुशील कोइरालाको काँधमा आयो, उनी हुञ्जेल पार्टी सत्ता यही गुटले चलायो । महाधिवेशनको मुखैमा सुशीलले साथ छाडेपछि तत्कालिन उपसभापति पौडेल कार्यवाहक सभापति र सभापतिको उम्मेदवार बनेँ । त्यसपछि कोइराला–सिंह विरासतसहितको गुटको नेतृत्व पौडेलले गरिरहेका छन् । तर, उनले पार्टी सत्ता भने जोगाउन सकेनन् । त्यसको प्रमुख कारणमध्ये हो– तत्कालिन महामन्त्री सिटौलाको विद्रोह ।
कोइरालाको निधनपछि पौडेलको नेतृत्व स्वीकार्न नसकेका सिटौला लोकप्रिय युवा नेता गगन थापालाई महामन्त्री र उमाकान्त चौधरीलाई कोषाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएर देउवा र पौडेलसँगै सभापतिको प्रतिस्पर्धामा उभिए । उनको उम्मेदवारीकै कारण देउवा र पौडेल दुवैले बहुमत ल्याएनन् ।
दोस्रो चरणमा सिटौलाले देउवालाई सघाए, उनैको सहयोगमा १५ वर्षदेखि संघर्षरत देउवा पार्टी सत्तामा पुगे । १२ औं महाधिवेशनमा पराजित देउवाले पुरै कार्यकाल पार्टीमा ४० प्रतिशत भाग खोजे, तर उनी सभापति भएपछि भने त्यो ४० प्रतिशतको भाग पौडेल र सिटौला दुवैलाई भाग लगाए । महाधिवेशनमा सिटौलाले लगाएको गुन देउवाले पार्टी र राज्यसत्तामा उनलाई भाग दिएर तिरे, तिरिरहेका छन् । त्यहीकारण सिटौला १४ औं महाधिवेशनका लागि फेरि एउटा शक्ति बनेका छन् । यसपटक सिटौलाको त्यही शक्ति आर्जन शैलीको सिको अन्य नेताहरूले गर्न खोजेका छन् ।
जसकारण गुटभित्र थप गुट थपिएका छन् । संस्थापन समूहमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको आफ्नै गुट छ । कुनै बेला खुमबहादुर खड्काको प्रिय पात्र भनेर चिनिएका खड्कालाई अहिले पनि त्यो लिगेसीको नेता भन्नेहरू छन् । उनलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईको विचार पछ्याउने नेताहरूले समेत नेता मान्छन् । सहमहामन्त्री सुनिलबहादुर थापाको पूर्व राप्रपा पृष्ठभूमिका नेताहरू आफ्नै समूह छ । देउवासँगै निकट रहेपनि सहमहामन्त्री प्रकाशसरण महत त्यस्तै अर्को समूहमा प्रभाव राख्छन् । १३ औं महाधिवेशनपछि सिटौलाले आफ्नो गुटको नेतृत्व गरेकै छन् । उनीनिकट भनिने सांसद भीमसेनदास प्रधानले काठमाडौंका नेताहरूको अर्को झुण्डको नेतृत्व गर्छन् ।
पौडेल–कोइराला–सिंह समूहमा त झन् धेरै उपगुट छन् । वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइराला, पूर्वमहामन्त्री सिंह र केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले पनि सभापतिमा दाबी गरेसँगै आ–आफ्नो गुटको तयारी अघि बढाएकै छन् । समूहमा धेरै आकांक्षी भएसम्म केन्द्रीय सदस्यहरू को कता लाग्छन् अहिले खुलेका छैनन् ।
को कुन गुटमा छन् ?
वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिका नेताहरूमध्ये देउवासँग सबैभन्दा धेरै नेताहरू छन् । वर्तमान ८ पदाधिकारीमध्ये उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशसरण महत र सुनिलबहादुर थापा देउवा पक्षमै छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधि आफ्नै गुट बनाउने संघर्षमा छन् । महामन्त्री कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव पौडेल समूहका हुन् । प्रवक्ता शर्मालाई देउवाले नै मनोनित गरेका हुन् । आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यसहित अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमिति १२५ सदस्यीय छ । त्यसमध्ये नेता सिटौलासहित प्रदीप पौडेल, उमाकान्त चौधरी, शिवप्रसाद हुमागाई र सुधीर शिवाकोटी सिटौला टिममा छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ नेता पौडेल समूहका २७ जना केन्द्रीय सदस्यमात्रै छन् । त्यसबाहेक सबै देउवा समूहमै छन् । कुलबहादुर गुरुङ, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, महेश आचार्य लगायत केही नेता गुटबारे खुलेर बोल्दैनन् ।
नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, फरमुल्लाह मन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, एनपी साउद, अर्जुन जोशी, महालक्ष्मी उपाध्याय, भीष्मराज आङ्देम्बे, जीवनबहादुर शाही, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, अजयकुमार चौरासिया, अम्बिका बस्नेत, पुष्पा भुसाल, महेन्द्र यादव, सुरेन्द्रराज पाण्डे, शंकर भण्डारी, किशोरसिंह राठोर, मीन विश्वकर्मा, ईश्वरी न्यौपाने, सीता गुरुङ, सुजाता परियार, पार्वता डिसी चौधरी, केशवकुमार बुढाथोकी, गोविन्द भट्टराई, श्यामकुमार घिमिरे, चिनकाजी श्रेष्ठ, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, बीरबहादुर बलायर, डिला संग्रौला, रमेश लेखक, बहादुरसिंह लामा, लक्ष्मी परियार, हरिप्रसाद नेपाल, राधेचन्द्र यादव, ध्यानगोविन्द रञ्जित, अमृत अर्याल, अतहर कमाल मुसलमान र शिला खड्का देउवा पक्षमा छन् ।
पौडेल समूहबाट प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, दिलबहादुर घर्ती, मिनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, शेखर कोइराला, दिपक गिरी, चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, रत्न शेरचन, गगनकुमार थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, रामकृष्ण यादव, हृदयराम थानी, किरण यादव र सरिता प्रसाईं केन्द्रीय सदस्य छन् ।
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ २१:०९